Shiinaha Korontada iyo Automationka warshadda khadka dhameystiran iyo alaab-qeybiyeyaasha | Zhongshuo
1. Kontaroolka otomatiga ah ee qadka ayaa xakameynaya meel dhexe oo koontarool ah + kantaroolka I / O ee fog. PLC, MCC iyo koontaroolka wadista gawaarida ayaa lagu dhex darayaa golaha koontaroolka ugu weyn si ay ugu fududaato adeegsadayaasha dayactirka iyo meelaynta xarun dhexe. HMI iyo korantada I / O ee meelaha fog laga hago waxaa lagu dhex darayaa qalabka koongareeska ama sanduuqa qaybinta, iyadoo la adeegsanayo kontaroolada isku xirka isgaarsiinta baska. 2. Awooda korantada ee xariiqda ayaa ah seddex waji oo shan-silig ah koronto AC ah, oo awood siisa PLC, MCC iyo qeybta hagaajinta ...
1. Kontaroolka otomatiga ah ee qadka ayaa xakameynaya meel dhexe oo koontarool ah + kantaroolka I / O ee fog. PLC, MCC iyo koontaroolka wadista gawaarida ayaa lagu dhex darayaa golaha koontaroolka ugu weyn si ay ugu fududaato adeegsadayaasha dayactirka iyo meelaynta xarun dhexe. HMI iyo korantada I / O ee meelaha fog laga hago waxaa lagu dhex darayaa qalabka koongareeska ama sanduuqa qaybinta, iyadoo la adeegsanayo kontaroolada isku xirka isgaarsiinta baska.
2. Awooda korantada xariiqda ayaa ah seddex waji oo shan-silig ah koronto AC ah, oo awood siisa PLC, MCC iyo qeybta hagaajinta siday u kala horreeyaan. Kantaroolka wadistu wuxuu qaadanayaa habka caadiga ah ee baska DC inuu xoogga saaro korantada, xalliyo dhibaatada dib-u-cusboonaysiinta korantada iyo in la wanaajiyo heerka isticmaalka ka-soo-kabashada awoodda si loo gaaro ujeeddada kaydinta korantada.
3. CPU waxay qaadataa Siemens jiil cusub - simatics7-1500 taxanaha CPU, kaas oo leh faa'iidooyinka qaab dijitaal buuxa ah, qaabeyn bilaash ah, waqti-qabad fara badan oo badan, nidaamka-xakamaynta aaladda iyo rakibidda, bixinta shuruudaha lagama maarmaanka u ah hawlgalka xasilloonida qalab.
4. Kantaroolka fog ee I / O wuxuu xakameynayaa xakameynta baska isgaarsiinta PROFINET, kaas oo leh faa'iidooyinka xawaaraha degdega ah, isku-halaynta sare, awoodda fidinta xoog badan, xarkaha yar iyo dhismaha degdegga ah.
5. Shaashadda HMI waxay bixisaa interface mashiinka mashiinka bini aadamka oo si buuxda loo xakameeyo, oo shaqadiisa ugu weyn ay ka mid tahay: gelinta xogta ceyriinka ah, soo-gelinta cabirka geeddi-socodka, soo-saaraha xogta dhabta ah, soo-bandhigidda qalooca, xakameynta aaladda gawaarida, soo-bandhigidda macluumaadka qeylo-dhaanta, soo-jeedinta joojinta calaamadaha gurmadka degdegga ah, iwm.
6. Khadku wuxuu leeyahay kantaroolid dib-u-laabasho toos ah ama dib-u-laabasho, xisaabinta otomaatiga otomaatiga ah, kontoroolka isku-xirnaanta tooska ah ee otomaatiga ah, xakameynta is-jiid jiidka otomatiga ah Iyada oo loo marayo dhowr algorithms-ka si loo yareeyo faragalinta aadanaha, yaraynta culeyska howl wadeenada.
7. Xakameynta koronto ee Siemens iyo leexleexiyeyaasha ayaa laga doorbidi doonaa nidaamka xakameynta xawaaraha AC, iyadoo loo eegayo baahida isticmaaleyaasha inay beddelaan qaabeynta ama astaanta.
Hore: Qalabka kaabayaasha ah ee looxaanta ama xarigga xariiqda
Xiga: Qalabka Dhaqista & Qalajinta